Hooyo ma Hanjabtii Baad Ahaydeen? Hadal Tiro Habreed ma la Haday oo Hoos ma Loo Dayey – Rasaasa News
Hooyo ma Hanjabtii Baad Ahaydeen? Hadal Tiro Habreed ma la Haday oo Hoos ma Loo Dayey
Mar 2, 2010 Jwxo-shiil, JXSG, ONLF
Waxaad in badan haweenka ka maqli iyaga oo war isu sheegaya, warkaas ayaa dhagahaaga soo jiidan kolkaas ayaad inta aad u soo dhawaato aad odhan xageed ka maqashay warkan, kolkaas ayey ku dhihi “waa gamabada haweenka.” Kolka ay eraygaas yidhaahdaan ragu wuxuu u qaataa war jira ma aha, waxaanse ogaaday in haweenku ay ka siyaasad iyo caqliba badan yihiin raga, dhabtiina gambadoodu ay tahay telephone aan lacag u baahnayn.
Waxaa inta badan dhacda in dadaalada ay dad sameeyaan, oo waxtar u yeelata bulshada in Eebe weyne amarkiis ay dadkale waxayeel u gaystaan dadaalkaas, ka dibna uu dadaalkii halkaas ku dhamaado.
Maadaama dhulka Somalida Ogadeeniya mar walba ay ka jirto dhibaato gumaysi oo keenta kacdoon colaadeed. Dad Ummada Somalida Ogadeeniya ka mid ah, ayaa isku dayo in ay dadaal halgan sameeyaan, kolka uu meel gaadh is leeyahayna waxaa uu yimaada kuwo dumiya.
Kolkasta wax cusub la soo saaro dadka ay aqoontu ku yar tahay hubsasho la,aan way jeclaadaan dhakhsana way ka xiisa dhigaan, laakiin dadka aqoonta u saaxiibka ahi way hubsadaan.
Xiligii Jabhada Somali Galbeed ay ummadeenu aadka u jeclayd gabdhuhu waxay ku dhaantayn jireen “Jabhad mooyee ninkale waabataan ka jufmaayey halaalee.” Marka ay guur noqoto xiligaas, Gabdhuhu waxay diidi jireen hantiilaha da,ada yar ee ay saddexda meesi ee caanaha macaan xeradiisa buuxaan, waxayna raaci jireen Jabhad qalalan oo qori AK47 ah iyo sarwaal jeexjeexan wata oo aan haysan waxar beerkeeda la calaliyo.
Mudo ka dib waxaa soo baxday, Odhaahdan ah hooyo ma hajabtii baad ahaydeen? Odhaahdan waxaan ka soo qaatay eray bixin ay kolkii dambe hooyooyinka Somalida Ogadeeniya ee reer miyiga ahi ay u bixiyeen Jabhadii Xoreynta Somali Galbeed. Kolkaas oo ay Jabhadu furfuratay oo ay qori iyo quudba ka weyday dawladii taakulaynaysay ee Somaliya. Xiligaas oo ay ciidamii Jabhadu noqdeen wax Somaliya galay iyo wax reerkoodii aada. Waxaa jiray qaar aan intaa midna noqon oo iyagu noqday qawlaysato magac Jabhadeed ku qadhaabta, kolbana reer gabaanada, waa xiligaas kolka ay Habruhu hadal tiro ugu yeedheen Hooyo ma hanjabtii baad ahaydeen.?
Muddo ka dib, waxaa ummada Somalida Ogadeeniya mar saddexaad marada u hugfiyey ururkii ay wada jeclaadeen ee Jabhada Wadaniga Xoreynya Ogadeeniya [Jwxo] afka qalaadna lagu yidhaahdo Ogaden National Liberation Front [ONLF]. Tana waxay gabdhaheenu ugu heeseen “ONLF midkaan rumaynin kan raacin een hir galinin rugtiyo raaskayno joogno in laga ruqseeyo weeye.” Iyana Eebahay Jwxo-shiil buu u soo diray.
Dharaar dhawayd ayaa waxaan la sheekaysanayey nin qaaraanka u uruuriya garabka ONLF Maxamed Cumar Cismaan. Wuxuu ku turaabay walee Maxamed Cumar iyo garabkii uu madaxda ka ahaa way u dhamaatay, maxaayeelay haweenkii awal hore la diyaarka ahaa qaaraanka umbaaba hada kolka aad waydiiso kaa horkeeni “Idhaaf Idhaaf ma hayo lacag uu Jwxo-shiil qaatee.”
Wuxuu yidhi mar hadaad aragto haweenku wax ay ka soo horjeedsadaan, waxaas way u dhamaatay Ogowbuu yidhi waxa ay diidaana laguma karee “Eebo yayna na jeclaanin nalaggama karee, Eebow yayna na nicin nalagguma karee”.
Wariyuhu, waxaa uu ka tirsanaan jiray JXSG, ONLF-na taageere isaga ayaa sheekada iiga sheekeeyey, rasaasna wuu xadhay.
Qore: Mawliid Rasaas
War deg dega
Innaa Lillaahi wa Innaa Illaahi Raajicuun